I Rosia na ny Federasionan' i Rosia dia fanjakana federaly ary firenena ngeza indrindra eo an-tany, manana mponina miisa 142 tapitrisa any ho any araka ny fanisam-bahoanka natao tamin'ny taona 2007. Misabaka eo amin' i Eorôpa (25,3%n' ny fivelarany) sy i Azia Atsinanana (74,7%) izy. Ny firenena rosiana dia manana velarana 17 tapitrisa km2 (indroan' i Etazonia ary in-30n' i Madagasikara). Manana faritr' ora raika ambin'ny folo izy. Ny renivohiny dia i Môsko, fiteny rosiana ny fiteny ôfisialy any ary ny robla no sandam-bola ampiasainy. Atao hoe Россия / Rossiya na Российская Федерация / Rossiyskaya Federatsiya izy amin' ny fiteny rosiana.
Na dia misy ranomasina maromaro aza ny manodidin'i Rosia dia manana toetrandro an-kôntinenta amin'ny tany mangatsiaka sy sarotra ipetrahan'ny olona izy.
Betsaka ny harena an-kibon'ny tany any Rosia: misy ny solitany sy ny vato sarobidy. Mivoatra be ny orinasa mikasika ny fanamboarana sambondanitra sy ny fanamboarana basy. Ny fanamboarana sambondanitra no nahavoalohany an' i Rosia izay nanti-nizaha ny habakabaka tamin'ny taona 1957.
Ny Repoblika Sôsialista Federativan' i Rosia (RSFSR) no repoblika lehibe indrindra tao amin' ny Firaisana Sôvietika.
Tamin'ny faran'ny taona 1991 dia misy firenena vaovao dimy ambin'ny folo avy amin'ny Firaisana Sôvietika taloha, isan'izany i Rosia, izay nandova ny 3/4n' ny tanin'ny Firaisana Sôvietika taloha (izany hoe 17 tapitrisa km²) sy ny antsasaky ny mponiny sy ny 2/3'ny orinasany ary ny antasaky ny toeram-pamboleny.
1.2 Rosia tao amin'ny Firaisan'ny Repoblika Sôsialista Sôvietika
Nanomboka tamin'ny taona 1904 ny Ady Rosianina-Japôney ary nifarana tamin'ny taona 1905 niaraka tamin'i Japàna nandresy ny ady. Ny faharesen'ny Rosiana dia isan'ny nampisy ny revolisiona taty aoriana.
Rosia tao amin'ny Firaisan'ny Repoblika Sôsialista Sôvietika[hanova | hanova ny fango]
Tamin'ny Oktobra 1917, ny Bôlsevika (antsoina hoe "Kômonista"), izay voatariky ny hevitr'i Karl Marx sy Vladimir Lenin, dia nandray ny firenena ary namono ny Tsar sy ireo olona hafa nijoro nanohitra azy ireo. Vao nandray ny fahefana ry zareo, dia namorona ny fanjakana kômonista voalohany ny Bôlsevika nentin'i Vladimir Lenin sy Leon Trotsky.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosia&oldid=1040767"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:51 ity pejy ity.